ठुलो संख्यामा यी देशका महिलाहरु कृषि क्षेत्रमा आवद्ध छन्
एजेन्सी । कृषि पेशामा आवद्ध भएर करोडौँ कमाउने महिलाहरुको कमी छैन यो संसारमा । आजा पनि लाखौँ महिलाहरु कृषि पेशामा आवद्ध रहेका छन् ।
बच्चालाई बोर हुन दिनुहोस् !
तपाईं बच्चा बोर नहोस् भनेर चिन्तित हुनुहुन्छ ? उसो भए त्यस्तो चिन्ता त्यागिदिनुहोस् । शिक्षा विशेषज्ञ डा. टेरेसा बेल्टनका अनुसार, तपाईंको बालबालिकाहरु लगातार सक्रिय रहँदा उनीहरुको कल्पनाशीलतालाई बाधा पुग्न सक्छ ।
यी देशहरुमा हुन्छ सबैभन्दा धेरै डिभोर्स
७ करोडको बिकिनी लगाएर एल्सा होस्क र्‍याम्पमा (भिडियो सहित)
एजेन्सी । स्विडेनकी मोडल एल्सा होस्क निकै महंगो बिकिनी लगाएर र्‍याम्पमा हिडेको फोटो सार्वजनिक हुँदै विश्व जमात नै एकपटक बिकिनीको फोटो हेर्न तम्सिएका थिए । केही महिना अघि एक फेशन शोमा उनी निकै महँगो बिकिनी लगाएर र्‍याम्पमा पुगेकी थिइन् ।
प्रत्येक वर्ष लामखुट्टेले मार्छ सबैभन्दा धेरै मानिस, अन्य जीवहरुको सुची यस्तो
एजेन्सी । विश्वमा दैनिक हजारौँ मानिसहरुको मृत्युको खबर आइनै रहन्छ । तर, के कति कारण उनीहरुको मृत्यु हुने गर्छ त्यसबारे भने कमैलाई थाहा हुन्छ । कुनै जीवका कारण पनि धेरै मानिसहरुको ज्यान जाने गरेको छ ।